Filipina dia nanitatra ny fandrarana ny dia any India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman ary UAE
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Filipina » Filipina dia nanitatra ny fandrarana ny dia any India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman ary UAE
Vaovao Mafanina ao Bangladesh • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • Oman Vaovao Vaovao • Pakistan Breaking News • Vaovao farany mikasika ny Filipina • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Filoham-pirenena Rodrigo Duterte
Nanaiky ny fanitarana ny famerana ny fivezivezena ny filoham-pirenena Filipiana Rodrigo Duterte mba hisorohana ny fiparitahan'ny karazana vaovaon'ny COVID-19.
Nametraka fameperana fitsangantsanganana tany India ny Filipina tamin'ny 29 aprily.
Filipina dia nanitatra ny fandrarana tsy hampidirana ireo mpandeha avy any Bangladesh, Nepal, Pakistan ary Sri Lanka ny 7 Mey.
Noraran'i Filipina ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena avy any Oman sy ny Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny 15 Mey.
Nanambara ny mpitondratenin'ny filoham-pirenena Filipina anio alina fa nanitatra ny fandrarana ny fivezivezena amin'ireo mpandeha miditra rehetra tonga avy any India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman ary ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) hatramin'ny 30 Jona 2021 ny governemanta ao amin'ny firenena.
Tao anaty fanambarana iray, nilaza ny tompon'andraikitra fa nanaiky ny fanitarana ny fameperana ny dia mba hisorohana ny fihanaky ny valan'ny COVID-19.
Tany am-piandohana dia nametra fameperana fitsangantsanganana tany India ny Filipina tamin'ny 29 aprily noho ny firongatry ny COVID-19 tao amin'io firenena io. Nanitatra ny fandrarana tsy hampidirana ireo mpandeha avy any Bangladesh, Nepal, Pakistan ary Sri Lanka izany amin'ny 7 Mey.
Noraran'i Filipina ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena avy tany Oman sy ny Emira Arabo Arabo Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra) tamin'ny 15 Mey taorian'ny nanaporofoan'ireo mpiasa Filipiana avy any ivelany izay avy any amin'ireny firenena ireny fa miovaova ny COVID-19 izay hita voalohany tany India.
Ny Filipina dia nitatitra fa 1,322,053 19 22,845 no voamarina fa tranga COVID-XNUMX hatramin'ny alatsinainy teo, anisan'izany ny fahafatesan'ny XNUMX.